Kooxda Manchester City oo qorsheynaysa inay £200m xagaagan suuqa kala iibsiga ku bixiso – Gool FM
Kooxda Manchester City oo qorsheynaysa inay £200m xagaagan suuqa kala iibsiga ku bixiso
Haaruun May 15, 2019
(Manchester) 15 Maajo 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa la soo warinayaa inuu rajaynayo inuu suuqa ku geli doono 200 milyan oo gini si uu xilli ciyaareedka soo socda kooxda ugu soo biiriyo xiddigo cusub oo hibo leh.
Citizens kooxda lagu naanayso ayaa difaacatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana ay noqon doontaa kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah oo ku wada guuleysta dhammaan koobabka laga dhigo gudaha dalkaas haddii ay garaacaan kooxda Watford final-ka FA Cup-ka.
Sida uu warinayo Wargeyska Daily Mail, macallinka Man City ee Guardiola ayaan suuqa ka nasan doonin, isagoo qorsheynaya inuu xagaagan suuqa kala iibsiga ku bixiyo markale lacago gaaraya 200 milyan oo gini.
Mashruuca xiddigaha cusub loogu soo darayo kooxda Sky Blues waxaa ku jra labo laacib oo khadka dhexe ka dheela, weeraryahan iyo difaac dhexe kuwaasoo uu bartilmaameedsanayo Pep.
Xiddiga kooxda Atletico Madrid ee Rodri iyo Weeraryahanka naadiga Eintracht Frankfurt striker Luka Jovic oo ku qiimeysan 60 iyo 50 milyan oo gini, waxaana la rumeysan yahay inay diiradda u saaran yihiin Man City.
Guardiola ayaa isku dheeli tiri doona xiddigaha kooxdiisa, waxaana sidoo kale Nicolas Otamendi, Fabian Delph iyo Eliaquim Mangala ay wajahayaan mustaqbal aan fadhin, iyadoo laga yaabo in laga diro garoonka Etihad.
Juan Mata oo wadahadal la furay Madaxa fulinta kooxda Manchester United
Bayern Munich oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO